Ghfgghh 4 months ago
Ziii zvangu necomment yangu ndingatukwa havadi chokwadi
Mukomana aka doneterwa nema supporters ake kuti atenge motokari ine bullet proof. Kwete zvawava kutaura izvo Jonso. Ma Office achatengerwa akatonakisa kupfuura e ZANU PF. Because ve MDC ALLIANCE mari yacho vanayo. Kwete yekuba.
Jonso kakufunga mabhasikoro aya akatenga nemari yekuba iya iyi mkomana ahana kuba ka Mari iyi
Jona, Zhuwa na Sevhiya must shut up. You are no longer relevant and off the radar, just keep quiet and search for food in your holes😂
Shamwari 4 months ago
Mari yezvimwe izvo tichamupa. For now tikuda kuti ambove nemota. Jonzo wazvinzwa ka
Jonh Wick b 4 months ago
Haaaaa these guys were dehorned and detoothed by Murambwi The Only Monomotapa of Zimbabwe Cmrde E.D Munangagwa.
Ngavanyarare havo kuti zii vari mumwena yavo iyoyo. Vakada kuramba vachivavata tovachera fanika mbeva zvakare tikavagocha tovasvasvangisa sadza🤣🤣🤣
Zhuwao, Moyo naSavior muchakaka neshungu. Chihuri is managing his sickness better 🤣🤣🤣